Filtrer les éléments par date : mardi, 15 février 2022
mardi, 15 février 2022 15:04
Lisi-pifidianana : Andro farany ahafahana misoratra anarana anio 15 febroary 2022
Andro farany anio 15 febroary 2022, ahafahana misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy. Ny fisoratana anarana izay efa nanomboka ny 01 desambra lasa teo, ary toy izany hatrany isan-taona.
Ny 28 febroary izao kosa no daty voatondron'ny Lalàna hamoahana ny lisitry ny mpifidy vonjimaika, izay mbola handalo vanim-potoan'ny fanamarihana sy fanamarinana isam-pokontany, mialoha ny hamaranana tanteraka izany ny 15 mey 2022.
mardi, 15 février 2022 15:02
Ministeran’ ny Fitsarana : Famindram-pitantanana
Tontosa androany Talata 15 Febroary 2022, teo Faravohitra ny famindram-pahefana teo amin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana teo aloha, IMBIKI Herilaza, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana Mpisolo toerana, sady Minisitry ny Asa, ny Fampananan’asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna Sosialy, RANAMPY Gisèle.
Navoitran’ny minisitra mpisolo toerana nandritra izany fa ny asa tsy maintsy mitohy, ary anaty fanatontosana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana. Mazava ny lalan-tsaina hoenti-manao izany dia : ny fametrahana tany tan-dalàna ; ny Fitsarana manakaiky Vahoaka, ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana, ny fampanajana ny Zon’Olombelona, ary ny fitantanana ny fonja.
mardi, 15 février 2022 14:14
Météo : Filazana momba ny toetry ny andro 15 febroary 2022 tamin'ny 01ora tolakandro
- Nipaka tao Ste Marie tamin'ny mitataovovonana teo ilay rivodoza DUMAKO ; 65 Km/ora ny rivotra miaraka aminy, arahina tafiotra 90 Km/ora.
- Mikisaka miakandrefana izy ka mahafaka 20 Km/ora.
- Hipaka an-tanety indray ao Soanierana Ivongo izy manodidina ny amin’ny roa ora tolakandro. Hitohy hikija hatrany ny orana, indrindra ho an’ny faritra Analanjirofo (>160 mm).
Tsy misy fiovana ny filazana loza :
Météo : Situation 15 février 2022 à 9h